I-SalesRep.ai: Sebenzisa ubuGcisa ukuZenzekelayo ukuNxibelelana kweThemba eliNinzi | Martech Zone
Njengoko le vidiyo isuka Ummeli zintengiso Imiboniso, isabelo esikhulu sexesha lokuthengisa elichithwayo lichithwe ukudibanisa okanye ukucwangcisa ukunxibelelana nomthengi. I-SalesRep isebenzisa i-call automation eneqonga elizimeleyo, lokucwangciswa kolwimi lwendalo ukuthatha loo mzamo kwiqela lakho lokuthengisa, ukubenza bakwazi ukujonga lonke ingqalelo yabo kwintengiso-hayi kunxibelelwano.
Iqonga livumela abathengi ukuba bakhe iinkqubo ezicwangcisiweyo ezisebenzisa i-imeyile, ilizwi kunye nemiyalezo ebhaliweyo yeSMS.
Ukucofa okulula kweqhosha kwiCRM yakho kuqala inkqubo yokulandela yonke into ekhokelayo umntu othengisayo ekufuneka enxibelelane naye. I-SalesRep ilandela kunye nezikhokelo zeenyanga ngaphandle kokudinwa. Xa isivumelwano singenziwanga ngexesha lokunxibelelana, yongeza ukukhokelela kulayini wenkqubo yokulandelela kwaye iqonga liya kwenza konke okunye.
Iimpawu eziphambili zeSalesRep zibandakanya:
Ukulandelelana - Ukuhamba kweefowuni, isicatshulwa kunye nenkqubo ye-imeyile ziya kwenza ukuba zilandele isikhokelo ngasinye. I-SalesRep.ai isebenza ngokusondeleyo nombutho wakho ukuseta ukulandelelana ngokusekwe apho ujikeleze khona umjikelo wentengiso yakho. Ukuba awuzange uthethe kwisikhokelo, amanyathelo alandelelanayo afanelekileyo ayathathwa. Ukuba ulandela ukuthengisa umnxeba wangaphambili kuye kwaqalwa okwahlukileyo. Yongeza nayiphi na inkqubo yokulandelela efunekayo kwi-SalesRep.ai.
Ukufowuna nge basekuhlaleni ubukho -ISalesRep.ai iya kubiza ikhokele egameni lakho rhoqo kwaye okoko ufuna. I-SalesRep.ai iya kubiza ukusuka kumanani endawo kwaye ayiyi kubakhathaza abaphenduli bakho de bafumane ukukhokela kumgca. Nje ukuba benze njalo - i-SalesRep.ai iya kubaxelela ukuba ithini iminxeba kwaye emva koko iza kuqhagamshela kummeli wakho okanye kwisebe lokutya. Ukuba isikhokelo asifumaneki, iSalesRep.ai iya kushiya i-voicemail okanye ixhome ukubuyela emva ngelinye ixesha.
I-AI SMS kunye nemiyalezo ye-imeyile -I-SMS ithunyelwa ivela kumanani endawo kwaye ii-imeyile zithunyelwa zivela kwii-akhawunti zakho zangasese ngokungathi bezithumela. Ngento ye-AI, xa iSaleRep.ai ifumana umyalezo ovela kukhokelo, inokuyiqonda intsingiselo kwaye isebenze kuyo. I-AI inokuma ngokuzithoba okanye ilibazise ukulandelelana; Ishedyuli okanye Hlela kwakhona umnxeba; kwaye uphendule imibuzo elula ke awunyanzelekanga.
Nantsi umfanekiso-skrini wendlela enokuthi iqhubele phambili ngayo injini yokulandelelana:
Inkqubo ibanzi, inako ukuntywila kubo bonke abathengi, yonke intengiselwano, kunye nayo yonke impendulo.
Bade babonelele ngolwandiso lweChannel:
Umdibaniso ubandakanya i-Salesforce, Velocify, iMicrosoft Dynamics, Hubspot, kunye ne-Infusionsoft. Sebenzisa iSalesRep.ai, iinkampani zinokuthintela ukuphulukana nabathengi, zinokukhulula ixesha lokuthengisa, kwaye ekugqibeleni zivale abathengi abaninzi.
tags: aiuseto lokuqeshwaubukrelekrele be-crmhubspotInfusionsoftIMicrosoft Dynamicsuseto lokuqeshwa kwentengisooomatshini bokuthengisaiifowuni zentengisoUlandelelwano lokuthengisaukuthengisaummeli zintengisoumthengisi.aiVelocity